Mpanamboatra sy mpamatsy lamba fanasan-damba mandeha ho azy China Shinva
Rapid-A-520 Automatic Washer-disinfector dia fitaovana fanasan-damba mahomby izay nanadihady sy novolavola araka ny zava-misy marina tany amin'ny hopitaly. Ampiasaina be izy io amin'ny fanasana sy famonoana otrikaretina amin'ny fitaovana fandidiana, ny enta-mavesatra, ny fantsom-panafody sy ny lovia, ny fanamafisam-peo fanatoranana ary ny fantsona mihombo ao amin'ny CSSD hopitaly na ny efitrano fandidiana. Ny tombony lehibe indrindra amin'ny fitaovana dia ny fitehirizana asa amin'ny hafainganam-pandeha haingana izay mety hanafohezana 1/3 ny ora fiasana noho ny taloha.
■ Famolavolana sy fizotran'ny efitrano lehibe
Ny efitrano conical ao amin'ny SUS316L dia mivelatra amin'ny fotoana iray nefa tsy misy zorony maty sy fefy mihombo, izay tsara kokoa ho an'ny fikorianan'ny rano sy ny fitsitsiana rano.
■ Rafitra fanaraha-maso manan-tsaina
Varavarana mihodina mandeha ho azy mitsivalana mandeha ho azy, fehezin'ny efijery mikasika, izay mety sy azo antoka. Ny fizotry ny tsingerina dia fehezin'ny PLC, tsy mila fanaraha-maso ny asa. Ny mari-pana rehetra, ny tsindry, ny fotoana, ny dingana dingana, ny fanairana dia azo aseho amin'ny efijery mikasika ary koa hosoratan'ireo mpanonta printy natsangana.
■ Fandaharana isan-karazany
Programa 11 efa voafaritra sy programa 21 nofaritan'ny mpampiasa izay azo faritana arakaraka ny takian'ny mpampiasa
■ Mora mamoaka sy mamoaka entana
Ny rafitra manual na mandeha ho azy amin'ny famoahana sy famoahana dia misy. Manasa lamba, mamindra trolley ary mampita ny rafitra, mifanentana amin'ny famolavolana ergonomika, mora ampiasaina sy apetraka.
■ Mitsitsy angovo
Efitra fanasana amin'ny rafitra fitehirizana rano mahafinaritra; Ny fiara mifono hafanana mialoha ny hafanana sy ny rafitra fiakarana sy fisondrotana manokana ary ny fantsom-pivoarana dia ahafahany mitsitsy rano sy rano 30% mihoatra ny taloha.
■ Fahombiazana haingana sy avo
Rapid-A-520 dia iray amin'ireo mpamono otrikaretina haingana indrindra eran'izao tontolo izao, izay ahena ho 28mins ny fe-potoana mahazatra, ao anatin'izany ny fanasana mialoha, fanasana, fiakarana voalohany, fiakarana faha-2, famonoana otrikaina ary fanamainana. Mandritra izany fotoana izany dia afaka manamboatra dabilio 15 DIN isaky ny tsingerina.
Ny rafitra fanafoanana ny rano dia mampihena ny fotoana fiomanana, tsy misy fotoana fiandrasana mandritra ny fihodinana.
Previous: Famonoana otrikaretina endoscope otrikaina malefaka
Manaraka: Haingam-pandeha haingam-pandeha elektronika elektronika avo lenta
Kasety peroxyde hidrogen
Tape famantarana ny sterilization etona maimaim-poana
Agenan'ny fanadiovana Multienzyme tsy miandany amin'ny fitsaboana ...
Fanasan-damba mitondra fiara fitateram-bokatra mandeha ho azy
Trolley tohatra (sosona roa)
Varavarankely famindrana interlock varavarana roa (singa iray)